192.168.8.1 - Bogga 8 ee 8 - Admin Login
192.168.8.10 Cinwaanka IP waa cinwaan IP gaar ah. Cinwaanada IP-ga ee khaaska ah gudaha ayaa loo isticmaalaa a Shabakadda aagga LAN (LAN) & waligood laguma arag internetka. Cinwaanada IP-ga ee khaaska ah waxaa lagu sharaxay RFC 4193 (IPv6) & RFC 1918 (IPv4).
192.168.8.10 Soo gal
192.168.8.10 waa IP-ga qaaska ah ee loogu talagalay soocelinta router maamulka guddiga. Tan iyo IP-yada kale sida 192.168.8.200, 192.168.0.35, 192.168.8.1, iwm waxaa si aqlabiyad leh looga aqbalay heerarka caalamiga ah ee loo yaqaan IPs router Suugaanta, xitaa waxaa loogu yeeraa "Default Gateway IP". Ruter qof walba isku mid maahan. Sidoo kale, waxaa jira kala duwanaansho u dhexeeya moodooyinka kala duwan ee shirkadaha la midka ah. Shirkadahan sida login IP waxay adeegsanayaan 192.168.8.10.
Cinwaan IP ah oo taxane ah 192.168.8.1 - 192.168.8.255. Baaxadda cinwaankan ee loo adeegsado shabakadaha guriga ayaa router u qaybin doonaa qalab kasta (laptop, I pad, Home PC, Telefoonka gacanta, iwm.) Otomaatig ah ee shabakadda deegaanka.
The http://192.168.8.10 Cinwaanka IP-ga waxaa iska diiwaangeliyey Hay'adda lambarrada loo qoondeeyey ee IANA Internetka oo qayb ka ah shabakadda gaarka u ah 192.168.8.0/24. Cinwaanada IP-ga ee meelaha gaarka ah looma qoondeynin urur kasta & qof kastaa wuu jimicsi karaa cinwaanadan IP-ga ah iyada oo aan loo oggolaan diiwaanka internetka ee maxalliga ah ee loogu magac daray RFC 1918, oo aan la mid ahayn cinwaanada IP-ga ee dadweynaha.
192.168.8.1 - 192.168.8.255 Baaxadda IP-ga ee IP-ga uu qayb ka yahay waa mid gaar u ah IP-ga oo hubinaya heerarka ay dejiyeen RFC 1918. Cinwaanada sida 192.168.8.10 lama aqbalo internetka dadweynaha. Haddii shabakada shaqsiyeed ay ubaahantahay inay kuxiranto internetka, waa inay u isticmaashaa marin ama marin wakiil.
Qosol leh admin admin
Qosol leh admin (midna)
Qosol leh admin password
MediaLink admin (midna)
Maxay cinwaanada sida 192.168.8.10 u caan ku yihiin?
Sida la sheegay, 192.168.8.10 Cinwaanka IP-gu waa qayb ka mid ah shabakad shaqsiyeed heer C ah. Taxanaha shabakadahani waa 192.168.0.0 - 192.168.255.255. Tani waxay ka dhigeysaa dhowr cinwaan oo suurtagal ah IP-ada 65,535. Fidintaan waxaa badanaa loo adeegsadaa shabakadaha shaqsiyadeed maadaama wadooyin badan oo wadatayaasha ah loogu tala galay 192.168.8.1, 192.168.1.1 or 192.168.0.1, sida cinwaankooda caadiga ah
Haddii aad kuxirto shabakadan taleefankaaga, ama laptop, kiniin, waxaad heleysaa cinwaan IP ah sida 192.168.8.10 xaaladdan.
Dib u helida router
Raadiye kasta waxaa marin uheli kara biraawsarka. Qor http://192.168.8.10 biraawsarka haddii cinwaanka IP-ga router uu yahay 192.168.8.10.
Waxaad ka heli doontaa bogga galitaanka. Badiyaa ereyada sirta ah & magacyada la adeegsado waa "1234" maamul ama "midna". Fadlan hubi diiwaankaaga marinka.
Haddii cinwaankaaga IP uusan ahayn router IP-gaaga, waxaa suuragal ah inaad dib uhesho router IP-ga oo wata amarka Ipconfig.
Helitaanka boggaaga maamulka waxaad u isticmaali kartaa boggaaga maamulka adoo qoraya 192.168.8.10 barta cinwaanka biraawsarkaaga oo waad xaqiijin kartaa furaha galitaanka.